Soomaaliya, 01 January 2020
Arbaco 1 January 2020
Waa kuma Maxamed Xaaji Axmed Ilkacase?
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa nin shalay ay maxkamadda milatariga ee Soomaaliya ku xukuntay dil toogasho ah, isagoo lagu helay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab isla markaana uu gaystay falal argagixiso iyo dil ah.
Kalluun kusoo caariyey xeebta Muqdisho oo la baarayo
Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegtay inay baareyso kalluun tiro badan oo shalay ku soo caariyay qaar ka mid ah xeebaha Muqdisho.
Kheyre oo kulamo siyaasadeed ka wada Dhuusomareeb
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo dhowaan gaaray magaalada Dhuusomareeb, si xal kama dambeys ah ay u gaaraan dowladda Soomaaliya iyo Ahlu-Sunna, ayaa la kulmay madaxda Ahlu-Sunna.
Kulan ku saabsan garsoorka oo lagu qabtay Hargeysa
Shir lagaga doodayay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta xeerarka kala duwan ee lagaga shaqeeyo arimaha cadalaaddda Somaliland sida qareenada, xafiisyada shareecada, xeerarka dhaqanka iyo xafiisyada garsoorka ee dowlada, ayaa lagu qabtay Hargeysa.
Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 502-aad
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa toddoba nin oo ka tirsan Al-Shabaab ku xukuntay dil toogasho ah kadib dhagaysi ka socday Muqdisho muddo ka badan toddobaad.
Howl-gallo dad badan lagu xiray oo ka socda Boosaaso
Ciidamada ammaanka ee gobolka Bari ayaa magaaladda Boosaaso waxay ka wadeen olole ay xilliga habeenimada ah baaritaano kaga fulinayeen xaafadaha magaaladda, waxaana ciidamadu ay guryahooda ka soo qabqabteen dhalinyaro tiro badan.
Baarlamanka Somalia oo ansixiyey miisaaniyadda 2020
Labada aqal ee baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda sannadka 2020-ka oo dhan ku dhowaad 470 milyan oo dollar.
Maxay ka dhigan tahay sheegashada Shabaab ee qaraxa?
Saddex maxbuus oo ka baxsaday Xabsiga Dhexe
Saddex maxbuus oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta baxsaday, sida ay sheegayaan warar ay heshay laanta Af-Soomaaliga ee VOA.
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda qaraxii Ex-Control"
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda qaraxii isgoyska Ex-Control. Af-hayeenka Al-Shabaab Cali Dheere ayaa sheegay inay ururku gaysteen aaraxa.